अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट भयो, फेरि एपलाई गर्नुहोस I - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट भयो, फेरि एपलाई गर्नुहोस I
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ मंसिर २०७३, शुक्रबार १०:०० |
मेलबर्न । एकपटक अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट भएपछि फेरि आवेदन दिन पाइन्छ कि पाइदैन ? यो धेरैले सोध्ने साझा प्रश्न हो । यसको सहि जवाफ नपाउँदा एकपटक अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट भएकाहरु द्धिविधामा बसेको पाइन्छ । तर एकपटक अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट हुँदैमा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । किनभने अष्ट्रेलियाको माइग्रेसन कानूनले अष्ट्रेलियाको भिसाका लागि पुनः आवेदन दिनसक्ने थुप्रै बाटोहरु प्रदान गरेको छ । प्रकृयागत रुपमा निवेदन दिन सके अस्वीकृत भएका वा रद्द गरिएका सबक्लास अन्तर्गतकै भिसा पाउने प्रवल सम्भावना छ । तर भिसा पाउने नपाउने सम्भावना पूर्ण रुपमा व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ ।
के त्यसो भए मैले अर्को अवसर पाउन सक्छु ?
यो प्रश्नको एउटै जवाफ हो–अवश्य पाउँनुहुन्छ । त्यसैले चिन्ता लिनुपर्दैन । बरु माइग्रेसनका विज्ञहरुसँग परामर्श गरि आवश्यक कदम चाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तपाईको योग्यता र दक्षताको आधारमा फेरि अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन सक्नुहुनेछ । यस्तै भिसा रिजेक्ट हुनुका कारणहरु विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर पछि त्यसलाई सुधार गरि आवेदन दिन सकिन्छ । यसका लागि इमिग्रेसन वेबसाइटबाट समेत आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ । यस्तै भिसा रिजेक्सन लेटरमा पनि के कारणले भिसा रिजेक्ट भएको हो भन्ने कारण खुलाइएको हुन्छ । त्यसैले रिजेक्ट भयो भनेर चिन्ता गरेर बस्नु भन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु सुधार गरेर पुनः आवेदन दिनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा रहँदा भिसा रिजेक्ट भए के अष्ट्रेलिया छोड्नैपर्छ ?
कुनै कुनै केसमा अष्ट्रेलिया छोड्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । किनभने सामान्यतया भिसा रिजेक्ट भएको मितिले २१ दिनभित्र एमआरटीमा अपिल गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । कहिलेकाहीं भिसा रिजेक्ट भए पनि अर्को भिसा पाउने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यो पनि व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ ।
अष्ट्रेलियाको भिसा किन क्यान्सिल हुन्छ ?
अष्ट्रेलियाको अस्थायी भिसा क्यान्सिल गर्न सक्ने थुप्रै कानूनी आधारहरु छन् । जस्तो एस ११६,एस ५०१ आदि ।
–हिमालयन कङ्गारु करियर डेस्क
Previousउदयपुरमा बस दुर्घट्ना हुँदा ३ तीर्थयात्रुको मृत्यु,१० घाइते
Nextसंसद वैठक पाँचौपटक स्थगित,सभामुख घर्तीले गरिन् गम्भीर ट्वीट
प्रवासी नेपाली मञ्च भिक्टोरियाको दोश्रो अधिवेशन हुँदै
२७ माघ २०७२, बुधबार १७:०५
अष्ट्रेलियामै गायिका अबुन पाण्डे ख्यालख्यालमै माया जालमा …
१ फाल्गुन २०७३, आईतवार ०३:३७
होशियर : अष्ट्रेलियामा लुटेराहरुले यसरी लुट्छन्
९ चैत्र २०७१, सोमबार ०७:३३
अष्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यमा नेपाल महोत्सवको तयारी
७ माघ २०७२, बिहीबार ०२:२७
अष्ट्रेलियाको चार्ल्स डार्विन युनिभर्सिटीमा विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि यस्तो छ छात्रवृत्ति योजना
मेलबर्नमा खुल्यो क्याप्कन होम लोन्स
अमेरिकाद्वारा इरानमा पुन: प्रतिबन्धको घोषणा
युवा संघले ‘दुई दिन खेतमा’ अभियान चलाउने